/Blog/Dianabol , Gallery/Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny dianabol-poopy
Posted on 12 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Dianabol, Gallery.
Miezaka manatsara ny volanao ve ianao, manomboka manomboka na mitazona ny tombony be loatra? Ny dianabol (methandrostenolone) dia tokony ho zavatra goavanao manaraka. Fantaro izay tokony ho fantatrao momba izany anabolic steroids, fampiasana, ny fahombiazany, ary ny fomba hampihenana ny vokatra hafa.
Raha mpanazatra mafy ianao, dia ho takatrao bebe kokoa ny ady amin'ny fahazoana moka. Ny fanoratana toeram-pandihizana iray sy ny fanaovana ireo fiasa mahatsiravina ireo dia mety tsy ampy ho an'ny fihenan-tongotrao.
Ny fitrandrahana dia manana tombony ara-pahasalamana, nefa mitaky faharetana, faharetana ary fotoana be indrindra. Midika izany fa tsy afaka manao fanatanjahan-tena mandritra ny herinandro fotsiny ianao, ary jereo amin'ny alalan'ny fitaratra, ary manantena hahita mozika mahagaga. Na izany aza, dia afaka manao zavatra amim-pahendrena ianao amin'ny fanamafisana ny fiasanao miaraka amin'ny steroids voazanaka anabolika, izay tsy isalasalanao hampitombo ny hozanao mandritra ny fito andro.
Inona no atao hoe Dianabol (Methandrostenolone)?
Description of Dianabol Powder
Raw Dianabol dia singa simika miaraka amin'ny CAS no. (72-63-9), anisan'ny kilasin'ny steroids anabolic C17. Izy io dia steroid steroids izay nalaza noho ny 1950. Ny zava-mahadomelina indrindra dia mahasoa ny atleta sy ny biriky izay maniry ny hihazona ny hozany ary hampiakatra ny heriny mandritra ny fotoana fohy.
Anabolic steroids dia fantatra fa hepatoxic. Mba hampihenana izany vokatra izany, dia nanangana vondrona methyl tamin'ny 17 ireo mpandrindra ny Dianabolth toerana. Ny fifamatorana indroa dia nampidirina amin'ny toerana voalohany sy faharoa amin'ny atôma karbona mba hampihenana ny mety ho endri-tsolika hafa toy ny akne na lahy baldness.
Tsy toy ny steroid hafa, ny vovobony proteinina Dianabol dia azo ekena amin'ny ankamaroan'ny firenena. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia fandaharam-potoana III voapetra ary tsy misy afa-tsy amin'ny ordinatera, indrindra any Etazonia
Na dia taorian'ny Ady Lehibe Faharoa aza, ny Amerikana sy ny Firaisana Sovietika dia nifaninana hatrany ary nitodika tany amin'ny fifampiarahabana. Na dia nandray anjara tamin'ny ady marina aza izy ireo dia voahelingelina izy ireo nifampitifitra tamin'ny fanatanjahan-tena sy ny volana.
Teo anelanelan'ny 1940 sy 50, dia nanjakan'ny Olaimpika ny Rosiana, noho ny vokatra avy amin'ny testosterone nampiasain'ireo atleta ireo. Na izany aza, ity tsiambaratelo ity dia fotoana fohy taorian'ny taona US. Ilay olioly olympika, John Ziegler, dia nahita ny fanesoana. Ho setrin'ny Firaisana Sovietika, dia nifanaraka tamin'ny Ciba Pharmaceuticals izy mba hizara vokatra mitovy amin'izany.
Dianabol (methandrostenolone) vovoka dia nipoitra tamin'ny faran'ny 1950s. Tena nalaza teo amin'ny 1960s sy ny '70s ho toy ny safidy miavaka amin'ny fandefasana steroids.
Tsy toy ny taloha, io zava-mahadomelina io no voalohany amin'ny steroid anabolic eo amin'ny tsena. Ny tanjon'ity zava-mahadomelina ity dia ny mampisongadina ny tsindrona tsizarizary ataon'ny atleta tsy ara-dalàna. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny androgenic sy misy amin'ny ordinatera any amin'ny ankamaroan'ny firenena. D-bol dia avo roa heny noho ny testosteron.
Andriamatoa Tononkalo 60 100 45
Ireo karazan-damba simika sy ara-batana amin'ny Dianabol
Anarana simika 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-iray
Teboka (° C) 163 - 167
Molecular weight 300.442 g / mol
Solubility Rano (9.7 mg / L amin'ny 25 ° C)
- Ny toaka
Asidra acetic glacial
Usage Manamora ny fitomboan'ny vatana
Marika sy anarana momba ny varotra · Dianabol
How to Buy Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
Ny fividianana ny steroide anabolic dia miankina amin'ny antony vitsivitsy. Ny toerana misy anao dia manana andraikitra manan-danja satria ny fanjakana sasany dia nametraka fameperana momba ny fividianana, ny fananana ary ny fampiasana ny poezia Dianabol. Ohatra, ny fampiasana methandrostenolone sy ny doka ao aminy dia tsy ara-dalàna any Etazonia, Aostralia, ary Kanada, raha tsy misy fametahana marina. Na izany aza, any amin'ny firenena hafa toa an'i Meksika, Dianabol vovoka mividy dia mora toy ny mividy mpivarotra kiraro.
Ny d-bol dia mety ho zava-mahadomelina voafetra ao amin'ny fanjakanao, fa mbola afaka manao fividianana legal avy amin'ny fahazoan-dàlana ianao Dianabol mpamokatra vovoka. Avelao aho hanazava. Raha tsy manana dokotera ara-dalàna avy amin'ny dokotera ianao, dia mety hitarika ny sainao amin'ny tsena mainty ny sainao. Eny, ny raharaha dia mety ho tsara loatra amin'ny fampiasana ny varavarana ambina, saingy azo inoana ianao fa hipetraka amin'ny fanafody sandoka, tsy miangatra, ary mahafaty.
Na dia tsy azo eritreretina aza ny hamindra amin'ny fanjakana izay efa nampihatra ny fampiasana steroïde, dia mbola afaka mitoetra ao amin'ny fivarotam-panafody Dianabol ao anaty aterineto ianao. Farafaharatsiny, nanome antoka ianao fa ambony ny vokatra avo lenta izay novolavolaina tao anatin'ny fepetra mangatsiatsiaka sy voafetra.
Dianabol Powdle For Sale
Mpivarotra an-tserasera maro no manolotra ny anabolic steroids. Hatramin'ny nisian'ny tondra-drano Shinoa hatramin'izay, ianao dia afaka miala amin'ny dihibe Dianabol China, indrindra indrindra amin'ny fividianana entana. Raha te hahita mpivarotra azo itokisana, hevero ny loharano avo lenta, ny fandefasana entana, ary ny fahazoana fampahalalana manan-danja amin'ny tranonkala manokana.
Dianabol vinaingitra an-tserasera:
Mandehana any amin'ny https://www.proanabolics.com/ na any amin'ny orinasa Dianabol azo itokisana azo itokisana toy ity Sinoa fivarotana.
Tsindrio eo amin'ny bara fitadiavana, asio "Dianabol", ary tadiavo ny votoaty
Hanosika anao hisoratra anarana kaonty hahitana mora foana ny vokatra mandritra ny fandefasana entana. Na izany aza, afaka misafidy ny hanamarina ny maha vahiny anao ianao.
Omeo ny antsipirian'ny kaontinao
Ampitahao ny baiko ary miandry ny famerenana eo an-tokotaninao.
Mariho fa ny vidin'ny poezia Dianabol dia miovaova amin'ny mpivarotra iray amin'ny iray hafa ary ny habetsaky ny vidinao.
Ahoana ny fomba fanaovana Dianabol ao an-trano
Raha mbola afaka mividy steroid iray efa vita ianao, afaka mividy fitaovana manaka-tsorona ianao ary tonga miaraka amin'ny dianabolinao dianabol dite. Ity dingana ity dia mahasoa amin'ny fananana ara-toekarena ary ny fiovam-po dia ahafahanao manamboatra ny doka mifanaraka amin'ny vatanao.
Misy ny dianabol ny fifandroana fifandimbiasam-pandaminana Dianabol, izay miova arakaraka ny fitaovana ampiasaina sy ny dosage.
Sterile glass glass
Fitaovam-panadiovana sy sivana maromaro
Aleo jerentsika ny antsipiriany momba ny fomba hanaovana Dianabol ao an-trano;
D-bol 1g 20g na 17.86ml 20g na 17.86ml 5g na 5.6ml 2.5g na 2.23ml
Olon-tavoara 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Mampiasà solika mena (31.77ml)
Amin'ny ankapobeny, ny tsiranoka Dbol dia mangidy mangidy, fa ireo ingredients etsy ambony dia tsy hanamaivana ny tsirony.
Ny fomba fiasa Dianabol (D-bol)
Dianabol vovoka dia manakana ny hozatra tsy ho simba rehefa manatsara ny fiarovana ny proteinina ary mitazona ny fihazonana azota. Ity zava-mahadomelina ity dia hahatonga ny vatanao hifantoka amin'ny proteinina rehetra ao anaty hozatra. Noho ny halaviran-tsavony fohy, dia hanomboka hanamarika ny fanovana ny fanovana sasany ao anatin'ny 7 - 10 andro.
Ny steroid dia mandrisika ny filan'ny mpampiasa, ny tanjaka ary ny fihetseham-po.
Dbol dia manana antsasaky ny androm-piainan'ny 4 ora. Rehefa heverina fa fohy loatra ilay vanim-potoana, dia mila manaparitaka ny dosage mandritra ny andro ianao mba hihazonana ny fifantohana ra.
Ny steroid dia ho hita hatramin'ny enim-bolana ka hatramin'ny fotoana nahalalanao azy. Raha mpilalao matihanina ianao dia tokony hiala amin'ny dianabol roa volana mialoha ny fitsapana.
Dianabol Results: Inona no hitranga?
Ny steroids anabolic dia miasa amin'ny alàlan'ny famerenana ny fizotry ny catabolic sy ny fihenan'ny anabolismana proteinina. Ho an'ny bodybuilders, mety hahatsapa hery manatsara ianao rehefa miasa. Na dia tsy mety hanome endrika anao aza i Dianabol, dia hampitombo kokoa ny hozatry ny hozanao izany ary hampitombo anao kokoa noho ny teo aloha.
Ho an'ny mpitsabo mpanofana, ny steroid Dianabol no fanampiana tsara indrindra amin'ny fanamafisana ny tanjakao sy ny fanomezana anao ny faharetana hiaretana ny fiasana mafy. Ny fanafody dia mampitombo ny fotoana fanarenana ary mampihena ny reraka.
Methandrostenolone dia ny ordinatera tsara indrindra ho an'ny marary izay manana fahasarotana amin'ny fahazoana na fitazonana lanja salama. Ny vokatra dia afaka mampiakatra ny vidin'ny 20 ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Manandratra ny testosterone
Raha mijaly amin'ny toetry ny testosterone ambany ianao, ny dokotera dia mety hitatitra fitsaboana ara-dalàna toy ny Dbol.
Mampitombo ny fisotroan-dronono sy ny fibobohan-jaza, indrindra taorian'ny soritraretin'ny hoditra, fandidiana, na fandoroana. Ankoatra izany, Dianabol dia ampiasaina amin'ny fikarakarana karazam-panafody manokana.
Dianabol (D-bol) Dosage sy fampiasana (Azo antoka ve ny mitondra Dianabol?)
Ny dosie standard Dbol dia miovaova eo anelanelan'ny 15 sy 50mg / andro. Na izany aza dia nisy olona sasany niaina ny mpampiasa dia hampiasa mihoatra ny 100mg isan'andro. Ny tena fototry ny fanamarihana dia ny dose avo amin'ny steroïde dia mety hisy fiantraikany amin'ny tsindrin-tsainao.
Ny vehivavy sy ny vao teraka dia tsy tokony handray zavatra mihoatra noho ny 15mg. Ho an'ny atleta vehivavy, ny dosage farafahakeliny isan'andro dia 30mg. Ny lanjany ambony lavitra noho izany dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny lahy sy ny vavy lahy ary ny dolara hafa tsy azo ovaina.
Dbol dia manana ny antsasaky ny androm-piainany, noho izany, ny ilana ny fizarana ny dosage 2 - 3 isan'andro isan'andro. Azo atao tsara ny maka ny zava-mahadomelina manodidina ny fotoana fisakafoanana mba hampihenana ny fihary mahazatra toy ny fihinanan-kena. Ny fomba iray azo antoka hampitombo ny fivelaran'ny Dianabol dia ny fampidirana grapefruits ao amin'ny sakafo.
Ny dbol dia steroid voalohany anabolika izay azo alaina am-bava. Na dia azo alaina betsaka aza ny zava-mahadomelina ary raisina ho toy ny takelaka, dia azonao atao ny manantona izany amin'ny alalan'ny tsindrona intramuscular. Ho an'ny vokatra tsara, tokony hanaiky ny dianabol ny stack amin'ny alalan'ny fampiasana steroid hafa toa an'i Durabolin, testosterone, Primobolan, na trenbolone.
Ny tandindona Dianabol dia maharitra mandritra ny herinandro sy enina herinandro miaraka amin'ny dingan'ny 30 - 50mg. Ao anatin'ny vanim-potoana, ataovy azo antoka fa haka ny steroid amin'ny diary isan'andro ny cardarine sy ny N2guard mba hisorohana ny fahavoazana aty. Tokony hisakanana ny Aromainina koa ny Aromasin, izay tompon'andraikitra amin'ny fananganana estrogen sy ny fihazonana rano.
Ny vokatra Dianabol dia hita matetika ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny fandraisana azy. Ireto misy sombiny momba ny habetsaky ny lanja azonao avy amin'ny tsingerina feno;
Period (herinandro) Meny (pounds)
Amin'ny faran'ny herinandro enina dia ilaina ny mandinika fitsaboana post-cycle amin'ny alàlan'ny fitsaboana hormonina ao amin'ny trondro gripa. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tsingerina dia hampidina ny level of testosterone. Noho izany, asaina ianao hiantoka ny hiverenan'ny lanjany amin'ny mahazatra raha toa ka very ny habetsaky ny muscle noraisinao. Ny fitsaboana dia maharitra hatramin'ny efatra herinandro.
Dianabol (D-bol) Ny fiantraikan-tsika: Ahoana no fomba hanalavirana ny fiantraikany
Ny tsiranoka Dianabol dia tsy mahasoa afa-tsy raha mampiasa azy amim-pahendrena ianao amin'ny fijerena ny fepetra fisorohana sy ny loza mety hitranga. Arakaraky ny hampitomboanao ny dosage, ny habetsahan'izay mety hahatsara ny fiantraikany.
Mitazona rano na mitebiteby
Fampitomboana ny prostate
Famaranana ny glandy
Ny fitomboan'ny volo tsy voajanahary
Fiatrehana ny aty
Ny fanararaotana na lahy eo amin'ny lahy sy vavy dia vehivavy, toy ny tady lava vava, ny fitomboan'ny volo, na ny fanitarana ny clitoris.
Fampitomboana ny kolesterol LDL ratsy sy ny fihenan'ny kolesterola tsara HDL
Ahoana ny fomba hanalavirana sy hananana fihenam-bidy Dianabol
Ampiasao ny inhibitor aromatase na anti-estrogen
Ny dbol dia tandindomin-doza amin'ny aretin-koditra. Rehefa be loatra ny hormonina ao amin'ny vatana, ny vokatra dia ny fihazonana ny rano, ny fiterahana, ny tsy fahampian-tsakafo, ny gynecomastia, na ny fahaketrahana.
Ny vaovao tsara dia ny hampiasanao tsindrona aromatase hanakanana ny fiovan'ny dbol ho estrogen. Ireto misy ohatra: ny letrozole, Aromasin ary Arimidex. Ataovy azo antoka fa mandray ireo fanafody ireo mandritra ny dianabol sy ny fitsaboana amin'ny dihy.
Andraikitra amin'ny fahasalamana ara-pahasalamana
Ny famenoana tsara indrindra dia tokony hanamaivanana ny toaka fisakafoana amin'ny alalan'ny fihenan'ny otrik'aretina. Raha misy ranom-boasary, NAC, TUDCA, miaraka amin'ireo zavatra hafa manan-karena, midika izany fa mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna izany.
Mila mandray Dianabol miaraka amin'ny mineraly izay manatsara ny haavon'ny kôlesterôla. Ny sasany amin'ireo fanampim-panazavana ireo dia ahitana vary masaka mena, alika trondro, niacin, na co-enzyme Q10.
Amin'ny ankapobeny, ny habetsan'ny testosterone novokarin'ny vatana dia tsy ho ampy mandritra ny fotoanan'ny Dbol. Raha toa ka mihena ny haavony, dia hijanona ihany koa ny dingana fananganana ny ratra. Noho izany, manampy amin'ny fanatontosanao ny tanjonao ny famokarana testosterone sasany amin'ny Dianabol.
Raiso ny sakafo manankarena amin'ny asidra matavy ary proteinina salama. Ny sakafo matavy tsara indrindra no antony voalohany mahatonga ny fitehirizana ny rano, noho izany, ny fitomboan'ny tosidra.
Mitondrà dosie kely sy mifehy
Ny mpandidy dia tsy tokony hihoatra ny doka 20mg / andro. Na dia mety hahatonga ny 100mg amin'ny steroid aza ny bodybuilders sasany, dia tsy azo antoka. Raha tsy maintsy hampitombo ny habetsahana ianao, dia marina ny 50mg. Ny dosage avo dia mifanaraka amin'ny fiantraikany mahery vaika toy ny fihenan'ny tosidra.
Mariho fa tokony hiasa mandritra ny enina sy valo herinandro ny dianabol.
Ankizy, tanora, na olon-dehibe mihoatra ny 30 taona
Ao an-tsain'ny zaza, ny fandraisana Dianabol dia hanelingelina ny fisian'ny taolana sy ny fivelaran'ny firaisana ara-nofo.
Ny steroïde dia mety hitarika ho amin'ny fihenan'ny foza
Ny mararin'ny homamiadan'ny nono sy ny prostaty
Hanomboka hahatsikaritra ny vokatra avy hatrany ianao manomboka ny dosage. Tsy mila mampitaha ny Dianabol aloha sy aorian'ny sary ianao mba hanamarihana ny fahasamihafana. Aorian'ny herinandro voalohany, hiseho bebe kokoa ny vatanao, ary hahatsapa tombony be ianao.
Raha manao fampiasana ao amin'ny gym, dia hanana hery ampy ianao hanaovana fanatanjahana mahery vaika na hampisondrotra vato mavesatra. Any amin'ny faran'ny vanim-potoana dia ho azonao ny 20lbs.
Manatsara ny vokatra hormonina ataon'ny olombelona
Ity zava-mahadomelina ity dia anisan'ireo vitsivitsy pitsaboana ara-dalàna izay mampiroborobo ny hormone mitombo. Raha mampifangaro ny dianabol miaraka amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fampiofanana tsy tapaka, dia manao asam-panafody ny asan'ny steroid. Na dia mahazo tombony be loatra aza ianao, dia mihena be ny vatanao.
Ny ankamaroan'ny steroïde amidy dia mety hipoitra. Na izany aza, i Dianabol dia ampitaina amin'ny alàlan'ny pilina, takelaka, kapsula, na amin'ny endrika mangarangarana. Azonao atao ihany koa ny manao ny dianabol dite recipe ary manova ny dosage.
Ny fiantraikan'ny dbol amin'ny dbol dia ny fiakaran'ny tosidra, ny fahavoazana amin'ny aty, ary ny gynecomastia. Ny fisian'ny trotrakotra feno tanteraka ao anatin'ny latsaky ny herinandro dia mety ho fiarovana. Afaka mifehy ny sisa amin'ny zavatra hafa ianao amin'ny fandinihana ny fitsipi-pifehezana manokana sy ny fanarahana ny toro-lalana, fa ny gynecomastia dia tsy voafehy.
Ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina hafa koa dia ny fahafahan'ny aretina, ny aretim-po ary ny fahasimban'ny aty.
Rehefa mandre momba ny steroids anabolic ianao dia maro ireo fanontaniana azo antoka amin'ny hazakazaka ao an-tsainao. "Rariny ve i Dianabol?","Afaka mahazo dosie tsy misy famaizana marina ve aho?","Oviana ny steroïd no noforonina?"Ary fanontana mitovy amin'izany. Ny lahatsoratra etsy ambony dia manana ny valiny azonao jerena.
Dbol mivarotra dia niely patrana teo anelanelan'ny 1960 sy 1970. Na dia izany aza, ny vokany eo an-toerana dia nametraka ny FDA ho sokajy III ho an'ny kilasy ary mametra ny fihinanana azy. Any Etazonia dia tsy misy afa-tsy amin'ny prescription ihany ny Dianabol.
The Top 10 esterter testosterone: inona no mety aminao? Fanamarihana momba ny Oxymetholone: ​​Ny toro-làlana farany amin'ny Oxymetholone (Anadrol)